🥇 ▷ Galaxy Note 9 wali waxay kujirtaa lafteeda muuqaal cusub ee midabaynta oo laga yaabo inaad jeclaan karto wax ka yar ✅
Galaxy Note 9 wali waxay kujirtaa lafteeda muuqaal cusub ee midabaynta oo laga yaabo inaad jeclaan karto wax ka yar
Mise waxay noqon doontaa kuwa aad ugu jeceshahay?
Xisaabinta munaasabada soo bandhigida ee Samsung Galaxy Note 9 – oo la qaban doono 9ka Agoosto – ayaa sii socota iyadoo lagu xusayo socodka joogtada ah ee macluumaadka iyo sawirrada ku soo dhacaya akoonkiisa. Markan waa mid cusub siin, oo leh dhadhan rasmi ah oo rasmi ah, kaas oo aan waxbo ahayn laakiin na siiya weli mid kale xaqiijinta muuqaalkeeda.
Laga soo bilaabo naqshadda guud, oo lagu garto ku dhowaad isku mid ah marka la barbar dhigo Qoraalka kaa horreeyay ee 8 iyo qaybta dambe ee halka laba sawir sawir si saf ah u abaabulan, oo ku toosan ka akhristaha faraha, ugu dambeyntii raaxo leh si loo helo indho la’aan leh farta tixraaca. Si ugu dambeyntii loo helo midabada.
AKHRISO: Sidoo kale Galaxy Note 9 ma noqon doonaa farcanka ugu dambeeya taxanaha Qoraalka?
Xaaladdan oo kale waxay ku xiran tahay midabaynta Lilac Xarago gurigu sharfo, a violet lilac Horay ayaa looga arkay Galaxy S9 sidaas darteedna hadda waxay umuuqataa inaan raadinayo inay Samsung soo jeediyaan sidoo kale liiska ugu dambeeya ee taxanaha Galaxy Note. Midab gaar ah, oo noqon kara jecel ama necbahay marka loo eego dhadhanka shakhsiyadeed, sidaa darteed loogu talagalay in lagu qaybiyo dadweynaha. Miyaad door bidaa midab-dhaqameed kaa sii badan, mise waad ku dhiirran doontaa?
Via: Telefon ArenaXigasho: NieuweMobil